သတင်း – Page5– Shwemyanmar
မြန်​မာနိင်​ငံ နှင့်အနုမြူ လက်​နက်
မြန်​မာနိင်​ငံ နှင့်အနုမြူ လက်​နက်​ အ​မေရိကန်​နှင့်​ဥ​ယောပနိူင်​ငံများသည်​မြန်​မာနိူင်​ငံကိုအနုမြူလက်​နက်​ထုတ်​လုပ်​​နေသည်​ဟုသံသယများစွာရှ်ိ​နေကြသည်​ ယင်းအစာမ​ကြေမှုက R2P ကိစ္စ တွင်​နိုပ်​ကွတ်​လိုစိတ်​များ၏​စေ့​ဆော်​မှူဖြစ်​​လေသည်​။ မြန်​မာနိူင်​ငံသည်​အနုမြူလက်​နက်​မပြန့်​ပွား​ရေးစာချူ ပ်​ကို၁၉၉၂တွင်​လက်​မှတ်​​ရေးထိုးခဲ့သည်​။အ​ရှေ့​တောင်​အာရှတွင်​နူကလီးယားကင်းမဲ့ဇုံစာချူ ပ်​ကို၁၉၉၅ခုနှစ်​တွင်လက်​မှတ်​​ရေိးထိုးခဲ့သည်​။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်​တွင်​မြန်​မာနှင့်​ရှရှားNuclear Reseach Centre ကိုတည်​​ထောင်​ရန်​စာချူ ပ်​ ချူ ပ်​ဆိုခဲ့သည်​။ရုရှားနူကလီးယားသု​သေတနဌာနသို့ပညာ​တော်​သင်​များ​စေလွှတ်​ခဲ့သည်​။ ￼ နူကလီးယားဓာတ်​​ပေါင်းဖိုကို10MW light-water reactorworking on 20%enrichedUraniun- 235 ဖြစ်​ပြီး​ဆေးပညာသုးံ medical isotopeProduction ဟုဆို​သော်​လည်းactivation analysis andSilicon doping system.. Nuclear waste treatmentများလုပ်​ခဲ့သည်​။ ၂၀၀၉ခုနှစ်​သြဂုတ်​လတွင်​Sidney Morning Heraldစာ​ဆောင်​မှမြန်​မာနိူင်​ငံတပ်​မ​တော်​မှဗိုလ်​မူးအဆင့်​ဘက်​​ပြောင်းထွက်​​ပြေးလာသူ Sai TheinWin မှနူကလီးယားလက်​နက်​လုပ်​​ဆောက်​​နေ​ကြောင်းအ​ထောက်​အထား ဖိုင်​များ ဓာတ်​ပုံများ​ရောင်းစားခဲ့ပြီး​သောအရာများကို​ဖော်​ပြခဲ့ပါသည်​။ UN Report တွင်​​မြောက်​ကိုရီးယားNuclear Technology ကိုမြန်​မာ အီရန်​ ဆီးရိးယားတို့ကဆက်​သွယ်​ရယူ​နေ​ကြောင်းထွက်​​ပေါ်လာပါသည်​ ။ဘက်​​ပြောင်းသူ၏​ပြောကြားချက်​အရ​မြောက်​ကိုရီးယား၏အကူအညီဖြင့်​ […]
Posted inသတင်းLeaveaComment on မြန်​မာနိင်​ငံ နှင့်အနုမြူ လက်​နက်
NLD ပါတီမှ မကွေးဝန်ကြီး ဦးနေမျိုးကျော် လူမှုရေးဖောက်ပြန်မှုကြောင့်ပါတီမှ ထုတ်ပယ်
NLD ပါတီမှ မကွေးဝန်ကြီး ဦးနေမျိုးကျော် လူမှုရေးဖောက်ပြန်မှုကြောင့်ပါတီမှ ထုတ်ပယ် ############################################## မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဦးနေမျိုးကျော်နဲ့ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တစ်ခုမှ ၀န်ထမ်းအမျိုးသမီးတဦးတို့ လူမှုရေးဖောက်ပြန်မှု ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီး လူမှုကွန်ရက်မှာ ပျံ့နှံ့လာခဲ့တယ်။ အဆိုပါဝန်ကြီးမှာ လက်ရှိဇနီးရှိသလို ဝန်ကြီးနဲ့ လူမှုရေးဖောက်ပြန်တဲ့ ဘဏ်ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးမှာလည်း ကာမပိုင် ယောက်ကျားလက်ရှိတယ်လို့ သိရတယ်.. ဒီလူမှုရေးဖောက်ပြန်မှုကြီးကို ဘဏ်ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးရဲ့ ယောက်ကျားကိုယ်တိုင် လူမှုကွန်ရက်ပေါ်တင်ပြီး ဖြန့်ချိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ – ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ၀န်ကြီးဦးနေမျိုးကျော်ဟာ ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်ဝန်ထမ်းတဦးနှင့် ဖောက်ပြန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ရေးသားဖော်ပြမှုဟာ လုံးဝ မဟုတ်မမှန်ကြောင်းနဲ့ ရေးသားသူတွေကို ဥပဒေကြောင်းအရ ရင်ဆိုင်သွားမှာ ဖြစ်သလို စွပ်စွဲသူတွေဖက်က သက်သေအထောက်အထားနဲ့ ပြန်လည် တရားစွဲမယ်ဆိုလဲ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းဖို့ အသင့်ရှိတယ်ဆိုပြီး ၀န်ကြီးနေမျိုးကျော်က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောခဲ့တယ်။ […]
Posted inသတင်းLeaveaComment on NLD ပါတီမှ မကွေးဝန်ကြီး ဦးနေမျိုးကျော် လူမှုရေးဖောက်ပြန်မှုကြောင့်ပါတီမှ ထုတ်ပယ်
ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ စကားတစ်ခွန်းကြောင့် အင်ဂျင်နီယာကြီးတွေ ကိုယ့်နဖူးကိုယ်ရိုက် ဘေးနားက ကားနဲ့ခေါင်းနဲ့ ဆောင့်တဲ့သူက ဆောင့် ဖြစ်ကုန်…
ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ စကားတစ်ခွန်းကြောင့် အင်ဂျင်နီယာကြီးတွေ ကိုယ့်နဖူးကိုယ်ရိုက် ဘေးနားက ကားနဲ့ခေါင်းနဲ့ ဆောင့်တဲ့သူက ဆောင့် ဖြစ်ကုန်… ဟိုတယ် သူဋ္ဌေးတစ်ယောက်က သူ့ ဟိုတယ်ကို ဓာတ်လှေကား တပ်ချင်တော့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ကို ခေါ်ပြီး အလုပ်အပ်တယ်. အဲဒီ အင်ဂျင်နီယာက သူ တပ်ရမယ့် ဓာတ်လှေကားအတွက် အထပ်တိုင်းမှာ အပေါက်ဖောက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အထပ်တိုင်းကို လိုက်ကြည့်ပြီး အတိုင်းတာ ယူနေတုန်း. သန့်ရှင်းရေး အလုပ်သမကြီးတစ်ယောက် ရောက်လာတယ်,,, “ဆရာ ဘာတွေလုပ်နေတာလဲဟင်”? အဲလိုမေးတော့ အင်ဂျင်နီယာကလည်း ရိုရိုသေသေ ပြန်ရှင်းပြတယ်,,, “အဒေါ်ရေ ဓာတ်လှေကားတပ်မလို့အဲဒါ အပေါက်တွေဖောက်ရမှာ လိုက်ကြည့်နေတာပါ,,, အဲတော့ အလုပ်သမကြီးက,,, “ဆရာ ဒါဆို နေရာတွေပိုကျဉ်းသွားပြီး အမှိုက်တွေလည်း ပိုရှုပ်လာမှာပေါ့နော်” အင်ဂျင်နီယာကြီးလည်း […]
Posted inသတင်းLeaveaComment on ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ စကားတစ်ခွန်းကြောင့် အင်ဂျင်နီယာကြီးတွေ ကိုယ့်နဖူးကိုယ်ရိုက် ဘေးနားက ကားနဲ့ခေါင်းနဲ့ ဆောင့်တဲ့သူက ဆောင့် ဖြစ်ကုန်…
မြန်မာ-ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေး၊ သာသနာထွန်းကားပြန့်ပွားရေးအတွက် သံဃာ ၂၀၀၀၀ ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှူပွဲ မန်းတွင်ကျင်းပမည်
မြန်မာ-ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေး၊ သာသနာထွန်းကားပြန့်ပွားရေးအတွက် သံဃာ ၂၀၀၀၀ ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှူပွဲ မန်းတွင်ကျင်းပမည် မန္တလေး၊ ဒီဇင်ဘာ ၉ မြန်မာနဲ့ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေး၊ ဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားပြန့်ပွားရေးအတွက်ရည်ရွယ်တဲ့ သံဃာအပါးနှစ်သောင်းဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှူပွဲအခမ်း အနားကြီးကို မန္တလေးမြို့မှာ လာမယ့်နှစ်ဇန်န၀ါရီ ၂၁ ရက်မှာကျင်းပပြုလုပ်သွားဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဆီကသိရပါ တယ်။ မန္တလေးမြို့ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ချမ်းမြသာစည်လေဆိပ်မှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး ဒီအခမ်းအနားကြီးကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ နဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ ဓမ္မကာယဖောင်ဒေးရှင်းတို့ပူးပေါင်းစီစဉ်မှုနဲ့ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ အခမ်းအနားအောင်မြင်စွာကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ရေးအတွက်ကိုလည်း ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်မွန်းလွဲ ၂ နာရီက မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးအစည်းအဝေး ခန်းမမှာ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာမှာ ဒီပွဲက တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကကြီးမှူးကျင်းပတယ်ဆိုတာထက် ပြည်သူတွေပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာကိုပဲ ပေါ်လွင်စေချင်တယ်လို့ အခမ်းအနားကျင်းပရေးဦးစီးကော်မတီနာယက မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ၀န်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်က လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ပါတယ်။ “အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရော၊ တစ်သီးပုဂ္ဂလတွေရော၊ စေတနာရှင်တွေရောပါဝင်ပြီး အစိုးရနဲ့လက်တွဲလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့အစိုးရက […]
Posted inသတင်းLeaveaComment on မြန်မာ-ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေး၊ သာသနာထွန်းကားပြန့်ပွားရေးအတွက် သံဃာ ၂၀၀၀၀ ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှူပွဲ မန်းတွင်ကျင်းပမည်
တက္ကသိုလ်​ကထိကတစ်​ဦး ​သေးဆုံးသည်​အထိ ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပြီး တိမ်းရှောင်နေသောတရားခံ ကိုယ်တိုင်လာရောက်အဖမ်းခံ
တက္ကသိုလ်​ကထိကတစ်​ဦး ​သေးဆုံးသည်​အထိ ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပြီး တိမ်းရှောင်နေသောတရားခံ ကိုယ်တိုင်လာရောက်အဖမ်းခံ ************************************** တောင်ကြီးမြို့UCTဟိုတယ်ရှေ့တွင် ဒီဇင်ဘာ၃ရက်နေ့ ကယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပြီး ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားသော တရားခံသည် ဒီဇင်ဘာ၈ရက်နေ့တွင်​ အမှတ်၁၈ယာဉ်ထိန်းရဲဒုတပ်ဖွဲ့ခွဲမှုးရုံးသို့ ကိုယ်တိုင်လာအဖမ်းခံခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ ဒီဇင်ဘာ၃ရက် ည၈နာနာရီအချိန်ခန့်တွင် တောင်ကြီးမြို့ ဗိုလ်ချုပ်​​အောင်ဆန်းလမ်းမေ​ပါ်​ UCT ဟိုတယ်အနီးတွင် ဘူမိဗေဒဌာနမှ ကထိက ဦးစိုးမင်းဦးနှင့်သမီးမဇင်လှိုင်နှင်းတို့စီးလာ သောဆိုင်ကယ်အားကားဖြင့်​တိုက်မိပြီးဦးစိုးမင်းဦးနှင့် သမီးမဇင်လှိုင်နှင်း တို့မှာအခင်းဖြစ့်သည့်နေရာတွင်သေဆုံးသွားခဲ့သည်​။ ယာဉ်​တိုက်​မှုတွင်​ တရားခံကထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားရာ တိုက်ပြေးယာဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဖမ်းမိနိုင်ရေးအတွက်နယ်မြေခံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ယာဉ်ထိန်းရဲများပူးပေါင်းပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးရာ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူသည် သက်ထွဏ်းဇော် (ခ) အရေး ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ “ကွင်းဆက်တွေကိုလိုက်တဲ့အခါမှာ တရားခံက သက်ထွဏ်းဇော်ဆိုတာ သိရတယ် စုံစမ်းတဲ့အခါမှာ သူနဲ့အဆက်သွယ်မရဘူး သူ့မိသားစုတွေ သူ့ဖခင်နဲ့ပဲအဆက်သွယ်ရတယ် သူ့မိဘကို ဆက်သွယ်ပြီးတော့ တရားခံကိုလာအပ်ဖို့ အကြောင်းကြားထားတယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း သူသွားတတ်​တဲ့နေရာတွေအားလုံး တောက်လျောက်စောင့်ကြည်နေတော့ သူလည်း လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ […]
Posted inသတင်းLeaveaComment on တက္ကသိုလ်​ကထိကတစ်​ဦး ​သေးဆုံးသည်​အထိ ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပြီး တိမ်းရှောင်နေသောတရားခံ ကိုယ်တိုင်လာရောက်အဖမ်းခံ
” ပွဲကတော့ စကြမ်းပါပြီ ”
” ပွဲကတော့ စကြမ်းပါပြီ ” —————————- ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က တင်သွင်းခွင့်ပိတ်ထားတာကို ရှမ်းပြည်နယ် လွှတ်တော်က ထောက်ခံသူများလို့ မြောင်ပိုင်း မဟာမိတ် တပ်ဖွဲ့တွေ ဖြစ်တဲ့ကေအိုင်အေ၊ အမ်အန်ဒီအေအေ၊ တီအန်အယ်လ်အေနဲ့ အေအေ တပ်ဖွဲ့တွေ ကို အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေအဖြစ် အတည်ပြုလိုက်ပါပြီ။ ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာ အရေးကြီးအဆိုအနေနဲ့ တင်သွင်းခဲ့တာ။ ထောက်ခံသူ ၆၁ မဲ ၊ ကန့်ကွက်သူ ၄၅ မဲ ၊ကြားနေ ၇ မဲ ။ ပြည်နယ်လွှတ်တော်က မဲ ရလဒ်အရ အကြမ်းဖက် အဖွဲ့တွေ လို့ အတည်ပြုလိုက်ပြီဆိုတော့ ပြည်နည်အစိုးရ အနေနဲ့ ဆက်ပြီး လုပ်စရာရှိတာ လုပ်ကိုလုပ်ရတော့မှာ။ ဒဲ့ပြောရရင် အဲ့ဒီ အဖွဲ့တွေကို ဥပဒေနဲ့ အညီ ရှင်းလင်းဖို့ တရားဝင် […]
Posted inသတင်းLeaveaComment on ” ပွဲကတော့ စကြမ်းပါပြီ ”
R2P ကို ရင်မခုန်တဲ့မြန်မာ ********************
R2P ကို ရင်မခုန်တဲ့မြန်မာ ******************** ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခိုးဝင်ဘင်္ဂါလီမူဆလင်တွေကို လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်တယ် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့ အခြေအမြစ်မရှိတဲ့စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့အတူ မြန်မာကို R2P စာတမ်းနဲ့ UNက မြန်မာကို ခြိမ်းခြောက်လာပါတယ်… R2P ဆိုတာ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွင်းရှိ လူမျိုးစုတစ်စုကို မျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုများ ပြုလုပ်လာလျှင် ထိုနိုင်ငံကို အချိန်မရွေး UNကတပ်တွေက ဝင်ရောက်ထိန်းသိမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲ… ထားပါတော့ ရခိုင်မှာဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်မှု တွေကြောင့် တပ်မတော်က ရခိုင် တိုင်းရင်းသားတွေလုံခြုံရေးအတွက် ကာကွယ်ရေးတွေပြုလုပ်နယ်မြေရှင်းလင်းရေး တွေပြုလုပ်တဲ့အနေနဲ့ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက် သမားတွေကို ချေမှုန်းရှင်းလင်းခဲ့တယ်… ဒီလိုပြုလုပ်မှုတွေကြောင့် အကြမ်းဖက်သမား ဘင်္ဂါလီARSA တွေ အထိနာ ခဲ့ပြီး တစ်ချို့ ဘင်္ဂလားဘက်ကိုရှောင်ပြေးခဲ့တယ် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေ အကြမ်းဖက်ခံရတုန်းက UN ,OIC, EU နိုင်ငံတွေ အသံမထွက် မသိချင် ယောင်ဆောင်နေကြပြီး […]
Posted inသတင်းLeaveaComment on R2P ကို ရင်မခုန်တဲ့မြန်မာ ********************
မြန်မာနိုင်ငံဟာ နိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်အုပ်စုများ၏ ဂျီဟတ်တိုက်ခိုက်မှုအန္တရာယ်ရှိနေဟု အိုင်စီဂျီအဖွဲ့သတိပေး
မြန်မာနိုင်ငံဟာ နိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်အုပ်စုများ၏ ဂျီဟတ်တိုက်ခိုက်မှုအန္တရာယ်ရှိနေဟု အိုင်စီဂျီအဖွဲ့သတိပေး ========================== ========================== မြန်မာနိုင်ငံဟာ ARSA အကြမ်းဖက်သမားတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်အုပ်စုတွေနဲ့ နိုင်ငံဖြတ်ကျော် ဂျီဟတ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု အန္တရာယ်နဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ ဘယ်လ်ဂျီယံ နိုင်ငံ ဘရပ်ဆဲလ်မြို့အခြေစိုက် နိုင်ငံတကာ ပဋိပက္ခလေ့လာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ (အိုင်စီဂျီ)က သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ “မြန်မာပြည်ရဲ့ရိုဟင်ဂျာအကျပ်အတည်းဟာ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အဆင့်သစ်တခုကို ချဉ်းနင်း ၀င်ရောက်လာနေတယ်”လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကို ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်နေ့စွဲနဲ့ အိုင်စီဂျီအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။ ARSAအဖွဲ့ရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေဟာ အကြမ်းဖက်မှုအသစ်တွေ ထပ်ဖြစ်အောင်တွန်းပို့နေပြီး နောက်ဆုံးမှာ နိုင်ငံတကာ ဂျီဟတ်အုပ်စုတွေဟာ မြန်မာပြည်အတွက် ကြီးမားတဲ့ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာခြိမ်းခြောက်မှု ဖြစ်စေမယ်၊ အယ်လ်ကိုင်းဒါး၊ အိုင်အက်စ်နဲ့ တခြားဂျီဟတ်အုပ်စုတွေဟာ ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ သွေးစည်းညီညွတ်စွာ ရပ်တည်တဲ့ အကြောင်း ၀ါဒဖြန့်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အချိန်အတော်ကြာကတည်းက ကြေညာချက်တွေ ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာကနေ […]
Posted inသတင်းLeaveaComment on မြန်မာနိုင်ငံဟာ နိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်အုပ်စုများ၏ ဂျီဟတ်တိုက်ခိုက်မှုအန္တရာယ်ရှိနေဟု အိုင်စီဂျီအဖွဲ့သတိပေး
ဘင်္ဂါလီများကို တိုင်းရင်းသားကျေးရွာများအနီးတွင် နေရာချထားခြင်းမပြုရန် မောင်တောမြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးကတောင်းဆို
ဘင်္ဂါလီများကို တိုင်းရင်းသားကျေးရွာများအနီးတွင် နေရာချထားခြင်းမပြုရန် မောင်တောမြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးက တောင်းဆို ========================== ========================== မောင်တောအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပြီးနောက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသို့ တိမ်းရှောင်သွားသည့် ဘင်္ဂါလီ များပြန်ရောက်လာလျှင် အကြမ်းဖက်မှုများ ထပ်မံဖြစ်နိုင်၍ အဆိုပါ ဘင်္ဂါလီများကို တိုင်းရင်းသားရွာအနီးတွင် နေရာချထားခြင်းမပြုရန် မောင်တောမြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးက တောင်းဆိုသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးကို ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်က မောင်တောမြို့သာသနာ့ဗိမာန်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ကျေးရွာနှင့် မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်များ မှ ကိုယ်စားလှယ် ၆၀ ကျော်တက် ရောက်သည်။ အစည်းအဝေးအပြီး ထုတ်ပြန်သော အချက် ကိုးချက်ပါကြေညာချက်တွင် အကြမ်းဖက် ဘင်္ဂါလီများကို ထောက်ခံအား ပေးသည့် UNနှင့်OIC အပါအ၀င် ပြည်ပနိုင်ငံများက မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရနှင့် တပ်မတော်အပေါ် ပြစ်တင်ရှုတ်ချနေမှုများကို ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ ‘‘ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာ၊ နိုဝင်ဘာလကတည်းက မြို့နယ် […]
Posted inသတင်းLeaveaComment on ဘင်္ဂါလီများကို တိုင်းရင်းသားကျေးရွာများအနီးတွင် နေရာချထားခြင်းမပြုရန် မောင်တောမြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးကတောင်းဆို
ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်မှ ၁၄ ရက်အတွင်း အအေးပိုလာနိုင် ========================== ========================== အာရှတိုက် အရှေ့ မြောက်ပိုင်းဒေသများသို့ အအေး လှိုင်းဖြတ်သည့်အရှိန်ကြောင့် မြန် မာနိုင်ငံတွင် ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်မှ ၁၄ ရက်အတွင်း အအေးပိုလာနိုင်ကြောင်း မိုးလေ၀သပညာရှင် ဒေါက်တာထွန်းလွင်က သတိပေးထားသည်။ အာရှအရှေ့မြောက်ပိုင်း ရုရှား၊ တရုတ်၊ ကိုရီးယားနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတို့တွင် ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်မှ ၁၄ ရက်အတွင်း ၀င်ရိုးစွန်း လေအေးများ တိုးဝင်မှုကြောင့် အ အေးလှိုင်းကျရောက်နိုင်ပြီး မြန် မာနိုင်ငံတွင် ပုံမှန်ထက် အနည်းငယ်ပိုအေးလာနိုင်ကြောင်းဒေါက် တာထွန်းလွင်ကပြောသည်။ ဒေါက်တာထွန်းလွင်က‘‘အအေးလှိုင်းက အာရှဒေသကို ရောက်မှာဆိုတော့ မြန်မာမှာ လည်း အနည်းငယ်ပိုအေးလာနိုင် တယ်’’ဟု ပြောသည်။ ရုရှားနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း၊ တ​ ရုတ်နိုင်ငံ […]
Posted inသတင်းLeaveaComment on ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်မှ ၁၄ ရက်အတွင်း အအေးပိုလာနိုင်